Mba ụwa – Page 2 – Igbo Services
Chigo	 Jun 27, 2022 0
Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtala ihe ọhụrụ molekul na-egbu ọrịa kansa…
China na-anwale sistemu mgbochi ngwa ọgụ.
WTO nyefere ngwugwu azụmaahịa bụ ọ pụrụ iche.
Afịrịka Agụmụakwụkwọ Ahụike Akụkọ na ewuewu Azụmahịa Egwuriegwu ejije na njem nlegharị anya
Sieverodonetsk: Zelenskiy kwere nkwa iweghachi ókèala.
Onye isi ala Volodymyr Zelenskiy ekwela nkwa iweghachite mpaghara Ukraine ka ndị agha na-agbasi mbọ ike na-alụ ọgụ n'okporo ụzọ ruo n'okporo ụzọ ọbara na obodo Sievierodonetsk dị n'ihu ọwụwa anyanwụ. Zelenskiy kwuru site na…
Onyeze mba Spain akasiela Naijiria obi maka odachi mere n’Steeti Rivers ￼
CHIDI IGWE	 May 31, 2022 0
King Felipe na Queen Letizia nke mba Spain ezigarala Prezidenti Muhammadu Buhari ozi nkasi obi maka odachi mere n’Port Harcourt isi obodo Steeti Rivers. Na ozi nye Prezidenti Buhari bu nke onyeze His Majesty the King, Felipe VI,dere: …
Prezidenti Buhari emela njem gaa mba Spain
Onyeisiala Naijiria bụ,Muhammadu Buhari ga eme njem taa bụ Tuuzde abali iri atọ nke onwa Mee,site na Abuja ruo Madrid nke mba Spain,dika onyeisiala mba Spain bụ,Pedro Sanchez kpokuru ya. Na oge njem a onyeisiala bụ, Buhari ga eje…
London ruo Lagos:nwafo Najirian gbaraya abali iri anona otu
CHIDI IGWE	 May 30, 2022 0
Nwafo ala Naijiria bu onye ogba tum tum aha ya bu, Mazi. Kunle Adeyanju, emechala njeem ogba tum-tum ya site na mba London ruo Lagos,ma si etua zie ndi Naijirian na Afrika ozi, ka ha muta inye obodo ha iji belata oke ntaramahuhu nye ndi…
Manchester City eburula iko Premier League nke 2021/2022 ￼
CHIDI IGWE	 May 23, 2022 0
Otu egwu Manchester City eburula iko Premier League nke ugboro anọ n’ime afọ ise,dika ha nyere Aston Villa ọkpụ atọ asatara nani abụọ n’ama egwuriegwu Etihad Stadium n’ụbọchi ikpeazu nke asompi afọ 2021/2022 season. Ndi otu Pep…
Prezidenti Buhari esila mba UAE loghachite Abuja
Onyeisiala Naijiria bụ,Muhammadu Buhari alọghachila Abuja,dika ọnọchara abali abụọ n’mba United Arab Emirates bụ ebe omere njem ọrụ. Prezidenti Buhari feturu na ngalaba nke onyeisiala nke ọdọ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe International airport…
Najiiria ga-enwe ezigbo nmekọrita hana mba UAE
Prezidenti Muhammadu Buhari ekwuputala njikere ya igba mbo hu na enwere ezi nmekorita n’etiti Naijiria na United Arab Emirates (UAE). Mbe ọna enwe nzukọ yana onyeisiala ọhụrụ na Abu Dhabi nke mba UAE bụ, Sheikh Mohamed bin Zayed…